Arsene Wenger Oo Xisaab Ku Saadaaliyay Dhibcaha Ay Ku Dhameysan Doonto Chelsea Horyaalka Premier League & Chelsea Oo Aan Ku Farxi Doonin | Laacibnet.net
Arsene Wenger Oo Xisaab Ku Saadaaliyay Dhibcaha Ay Ku Dhameysan Doonto Chelsea Horyaalka Premier League & Chelsea Oo Aan Ku Farxi Doonin
Arsene Wenger ayaa aaminsan in Chelsea ay seegi doonta afarta kaalimood ee ugu sareysa xilli ciyaareedkan ka dib markii uu xisaabiyay inay heli doonaan kaliya 63 dhibcood dhamaadka xilli ciyaareedka.
Halyeeyga Arsenel ayaa xisaab ku keenay dhibcaha ay Chelsea ku dhameysan doonto xilli ciyaareedka isagoo ka tusaale qaatay inay 43 dhibcood ka heleen 25 kulan oo ay ilaa iyo haatan dheeleen taasoo keeni doonta in Tuchel uu seego Champions League xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay.
Kooxda ay Chelsea ku xafiiltamaan London ee West Ham ayaa qaab ciyaareed fiican ku jirta iyagoo ku fadhiya kaalinta afaraad waxayna seddex dhibcood ka sareeyaan Chelsea iyadoo labada kooxood ay dheleen min 25 kulan.
Laakiin Wenger ayaa ka dhaadhacsan in Chelsea aysan qaban karin kooxaha ka sareeya isagoo rajada taageerayaasha Blues ku dilay xisaab.
Isagoo ka hadlayay barbarihii ay Chelsea la gashay West Ham Sabtidii, Wenger ayaa yiri:
“Waxaan dhihi lahaa waa natiijo cadaalad ah iyadoo hal koox ay ka faraxsan tahay kooxda kale.
“Southampton ayaa hubaashii ku faraxsan natiijada ka dib markii ay joojiyeen guuldarooyinkii isku xigay.
“Waxaa walwal u ah Chelsea inaysan ku jriin qaab ciyaareedkoodii ugu fiicnaa taasoo ka dhacda horyaalka, laakiin ma jirto filasho ah inay horumar sameynayaan haddii ay ahaan laheyd dhanka taatikada, dhanka jir ahaaneed ama dhanka raacashada iyo isku xirka.
“Waxaan eegay dhibcahooda waxayna ku dhameysan doonaan 63 dhibcood. Taasi keeni doonta inay ka hoos maraan afarta kaalimood ee ugu sareysa.
“43 dhibcood ayay ka heleen 25 kulan oo ay ciyaareen, haddii celceliska kulamadaas la eego waxaad heleysaa 63 dhibcood dhamaadka xilli ciyaareedka, caadiyana 63 dhibcood looguma soo baxo afarta sarre.”
Ahmed chelsea says:
Arsenal lesadaali iyadaa sadale marabtaa